Hyundai က Android ကား DVD, Hyundai က Android 4.4 ကား DVD, Hyundai က Android 5.1 ကား DVD တရုတ်စက်ရုံ
ဖေါ်ပြချက်:Hyundai က Android ကား DVD,Hyundai က Android 4.4 ကား DVD,Hyundai က Android 5.1 ကား DVD,Hyundai က Android 6.0 ကား DVD,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > Hyundai က Android ကား DVD
Hyundai က Android ကား DVD ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, Hyundai က Android ကား DVD, Hyundai က Android 4.4 ကား DVD ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Hyundai က Android 5.1 ကား DVD R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
Android 10 PX5 / PX6 စတီရီယိုစနစ် AZERA 2015  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
I20 2018 အတွက် Android 10 Car Audio GPS  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Sonata 2011 gps ကားအညွှန်း  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
I20 2018 2019 အတွက် android 10.0 ကားစတီရီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
VW Touareg အတွက် ၂၀၁၁-၂၀၁၇ အတွက် ANDROID CAR PLAYER  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Hyundai Elantra 2014 အတွက်ရေဒီယိုရေဒီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Hyundai Elantra ၂၀၁၁ အတွက်ရေဒီယိုလမ်းညွှန်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
IX45 Santa Fe အတွက် autoradio android auto  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
IX25 2015 အဘို့အကားရေဒီယိုအသံချဲ့စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Android Headunit DSP Santa Fe ၂၀၁၁  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
IX35 Tucson 2017 နှစ်ဆ din ဦး ခေါင်းယူနစ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Hyundai I40 အတွက် ၂၀၁၁-၂၀၁၄ အတွက် Android ကား DVD player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Hyundai AZERA 2011-2012 အတွက် Android ကား DVD ရေဒီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
IX45 2013-2014 ကားစတီရီယို DVD စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Sonata 2016 ကားကို multimedia android  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
AZERA အတွက် Android system dvd gps  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် Hyundai Sonata အတွက် Android Car Stereo  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Sonata 2013 အတွက် Klyde DVD ကစားသမား ဦး ဆောင်သည့်ယူနစ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
IX35 Tucson 2015 အတွက် autoradio ဘလူးတုသ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Tucson IX35 2015 Autoradio Android 9.0 Navigation  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Android 10 PX5 / PX6 စတီရီယိုစနစ် AZERA 2015
Hyundai AZERA အတွက် Android9PX5 octa core head unit ကို ၂၀၁၅-၂၀၁၈ ၁) နောက်ဆုံးပေါ် Android9စနစ်၊ အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့် Rockchip ပရိုဆက်ဆာ 4GB RAM၊ Octa Core နှင့် 32GB ROM၊...
I20 2018 အတွက် Android 10 Car Audio GPS
Hyundai I20 2018-2019 LHD Europe အတွက် Android9PX5 octa core head ဖြစ်သည် ၁) Fast-Boot ကို Support လုပ်ပါ။ Install လုပ်ပြီးလျှင်၊ I20 အတွက် ဒီ dvd player သည်ဒုတိယအကြိမ်မှ boot တက်ရန် ၁ စက္ကန့် လောက်သာ လိုသည်။ (အခြားစက်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်စက္ကန့်...
Sonata 2011 gps ကားအညွှန်း
Hyundai Sonata 2011-2013 အတွက် Android9PX5 octa core head ၁) နောက်ဆုံးပေါ် Android9စနစ်၊ အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့် Rockchip ပရိုဆက်ဆာ 4GB RAM၊ Octa Core နှင့် 32GB ROM၊ အသုံးချပရိုဂရမ်များလည်ပတ်ရန်အတွက်ပိုမိုမြန်ဆန်သောမြန်နှုန်း။ ၂)...
I20 2018 2019 အတွက် android 10.0 ကားစတီရီယို
I20 2018 2019 အတွက် android 10.0 ကားစတီရီယို ပံ့ပိုးမှုစင်တာ GPS + ရေဒီယို + Bluetooth + USB + AUX + DVR ထည့်သွင်းမှု + Easy Connect / Mirror Link + WiFi + EQ + DSP OS: Android9စနစ် CPU ကို: Rockchip PX5 Cortex A53, 8 Core အဓိက Frenqency: 1.5GHz...
VW Touareg အတွက် ၂၀၁၁-၂၀၁၇ အတွက် ANDROID CAR PLAYER
VW Touareg 2011-2017 အတွက် Android 9/10 PX5 octa core ကားစတီရီယို ၁ ) အရည်အသွေးမြင့်သောရေဒီယို IC: NXP TEF6686; Built-in TDA7851 အသံချဲ့စက် IC; မျက်နှာပြင် resolution: 1024 * 600P, IPS မျက်နှာပြင်။2) ဤကား ကိုဗီဒီယို GPS Navigation, Google map...
Hyundai Elantra 2014 အတွက်ရေဒီယိုရေဒီယို
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 246 / Piece/Pieces
Hyundai Elantra 2014-2015 အတွက် Android 9/10 PX5 octa core ကားစတီရီယို ၁) နောက်ဆုံးပေါ် Android9PIE စနစ်၊ အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့် Rockchip ပရိုဆက်ဆာ 4GB RAM၊ SIX Core 32GB / 64G ROM၊ Cotex A72 (1.8Ghz) + A53 (1.4Ghz), ၂။ Fast-boot ကိုထောက်ပံ့ပါ။...
Hyundai Elantra ၂၀၁၁ အတွက်ရေဒီယိုလမ်းညွှန်
Hyundai Elantra 2011-2013 အတွက် Android 9/10 PX5 octa core ကားစတီရီယို ၁) Hyundai Elantra 2011-2013 ကားဗွီဒီယို သည် GPS Navigation ကိုအထောက်အပံ့ပေးပြီးဂူးဂဲလ်မြေပုံကိုကြိုတင်တပ်ဆင်သည် (အော့ဖ်လိုင်းမြေပုံအချက်အလက်မပါဘဲ); USB Port / Micro SD ကဒ်အထိုင်...
IX45 Santa Fe အတွက် autoradio android auto
IX45 Santa Fe အတွက် autoradio android auto IX45 အတွက်ဒီယူနစ်ကားမာလ်တီမီဒီယာဖျော်ဖြေရေးစနစ် Fast-boot ကိုထောက်ပံ့သည်။ တပ်ဆင်ပြီးနောက်, ဒီစက်ဒုတိယအချိန်မှစ။ Boot တက်ပြီးအောင် 1 စက္ကန့်ခန့်သာလိုအပ်သည်။ (အခြားစက်များသည်စက္ကန့် ၃၀ ကြာလေ့ရှိသည်။ ) IX45...
IX25 2015 အဘို့အကားရေဒီယိုအသံချဲ့စက်
IX25 2014 အတွက်ကားတစ်စီးရေဒီယိုအသံချဲ့စက် - 2015 IX25 2014 - 2015 အတွက် Car radio amplifier သည် GPS navigation & online / offline maps အမျိုးမျိုးကိုထောက်ပံ့သည်။ အင်တာနက်အတွက် WiFi နှင့် Hotspot ကိုအလွယ်တကူဆက်သွယ်နိုင်သည်။...
Android Headunit DSP Santa Fe ၂၀၁၁
Android Headunit DSP Santa Fe ၂၀၀၆ - ၂၀၁၁ ဤဌာနသည် Android Headunit Santa Fe နှင့်နောက်ဆုံးပေါ် Android 9.0 လည်ပတ်မှုစနစ်၊4+ 32G မှတ်ဉာဏ်၊ Octa-core CPU၊ အရည်အသွေးမြင့်စိတ်ကြိုက်ရေဒီယို RDS ။4* 50w...
IX35 Tucson 2017 နှစ်ဆ din ဦး ခေါင်းယူနစ်
IX35 Tucson 2015-2017 နှစ်ဆ din ဦး ခေါင်းယူနစ် Apple CarPlay နှင့် Android Auto အားလုံးသည် စမတ်ဖုန်းနှင့်မျက်နှာပြင်မှစာဖတ်ခြင်းကိုဖတ်ခြင်းသို့မဟုတ်နားထောင်ခြင်းစသည့်သင့်အတွက်လုံခြုံပြီးရိုးရိုးရှင်းရှင်းနည်းလမ်းတစ်ခုကိုအသုံးပြုရန် Klyde X35 Tucson...
Hyundai I40 အတွက် ၂၀၁၁-၂၀၁၄ အတွက် Android ကား DVD player
Hyundai I40 အတွက် ၂၀၁၁-၂၀၁၄ အတွက် Android ကား DVD player Support GPS + Radio + Bluetooth + USB + AUX In + DVR Input + Easy Connect / Mirror Link + WiFi + EQ + DSP OS: Android9စနစ် CPU ကို: Rockchip PX5 Cortex A53, 8 Core အဓိက Frenqency: 1.5GHz RAM...
Klyde Santa Fe 2006-2011 touch screen ကားရေဒီယို ပိုကောင်းတဲ့ရေဒီယိုဧည့်ခံနှင့်အတူ NXP TEF6686: 1. Android ကို 10 မေး, Octa Core, 4GB RAM ကို, 64GB ROM ကို, အရည်အသွေးမြင့်ရေဒီယို IC ။ ၂။ DSP ပါ ၀ င် သည့်ဒီဂျစ်တယ်အသံပရိုဆက်ဆာ၊ ဂရပ်ဖစ်ညီမျှခြင်း ၃၀၊...
Hyundai AZERA 2011-2012 အတွက် Android ကား DVD ရေဒီယို
Hyundai AZERA 2011-2012 အတွက် Android ကား DVD ရေဒီယို Support GPS + Radio + Bluetooth + USB + AUX In + DVR Input + Easy Connect / Mirror Link + WiFi + EQ + DSP OS: Android9စနစ် CPU ကို: Rockchip PX5 Cortex A53, 8 Core အဓိက Frenqency: 1.5GHz RAM -...
IX45 2013-2014 ကားစတီရီယို DVD စက်
IX45 2013-2014 ကားစတီရီယို DVD စက် ၁။ IX45 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ကားစတီရီယို dvd player ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ထားသောအင်္ဂါရပ်များကအသုံးပြုသူများအတွက်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်နှင့်ဂီတလုပ်ဆောင်မှု၊ ဂူဂဲလ်အသံရှာဖွေခြင်းစသည်တို့ပြုလုပ်နိုင်သည်။ IX45 2013-2014 USB စတူဒီယို DVD /...
Sonata 2016 ကားကို multimedia android
Sonata 2016 ကားကို multimedia android Sonata 2016 ကား multimedia android အတွက် ၁ ယခုအလွန်တည်ငြိမ်သည်။ OEM ဝန်ဆောင်မှုကိုလက်ခံပါတယ် သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းကိုလိုဂို၊ ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် UI အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Sonata 2016...
AZERA အတွက် Android system dvd gps
၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် Hyundai Sonata အတွက် Android Car Stereo
Sonata 2013 အတွက် Klyde DVD ကစားသမား ဦး ဆောင်သည့်ယူနစ်
Sonata 2013 အတွက် Klyde DVD ကစားသမား ဦး ဆောင်သည့်ယူနစ် USB cable ဖြင့် Sonata android head unit Apple Carplay နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော android ဖုန်းကိုသုံးပါသို့မဟုတ် wifi ဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားသော iphone ကိုသုံးပါ။ Sonata android ခေါင်းစဉ်ပန်းသီး carplay...
IX35 Tucson 2015 အတွက် autoradio ဘလူးတုသ်
IX35 Tucson 2015 အတွက် autoradio ဘလူးတုသ် IX35 Tucson 2015 အတွက်ဤ autoradio Bluetooth သည်အောက်ပါလုပ်ဆောင်ချက်များကိုပံ့ပိုးသည်။ ရေဒီယိုစခန်းများအမည်ပြောင်းထားသော RDS FM / AM ရေဒီယို၊ ရုပ်ပုံ၊ အိပ်စက်ခြင်း၊ ဂူဂဲလ်ပလေးစတိုး၊ Touch လက်ထောက်၊...
Tucson IX35 2015 Autoradio Android 9.0 Navigation ဤယူနစ် Tucson 2015 Autoradio Android 9.0 သည်နောက်ဆုံးပေါ် Android 9.0 operating system,4+ 32G memory, Octa-core CPU၊ အရည်အသွေးမြင့်စိတ်ကြိုက်ရေဒီယို RDS ဖြစ်သည်။4* 50w...
တရုတ်နိုင်ငံ Hyundai က Android ကား DVD ပေးသွင်း
1. နယူး HD ကို 1024X600 capacitive touch screen နှစ်ဆ din ကားတစ်စီး DVD ဖြစ်ပါသည်: သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းတွင်တွေ့ရှိရတူညီသောထိတွေ့မျက်နှာပြင်အစဉ်ထက် ပို. တုံ့ပြန်မှု, Bulit-in ကို WIFI ဟော့စပေါ့မျှဝေ: browser ကိုသင်တို့အဘို့လွယ်ကူပြီးချောမွေ့စွာအင်တာနက် access ကိုအင်တာနက်, လက်ပတ်နာရီ အွန်လိုင်းဗီဒီယို, သင်၏မေးလ်စစ်ဆေး, ဂိမ်းများ, download, apps များ, သို့မဟုတ်အခမဲ့အွန်လိုင်းမြေပုံနှင့်အတူပင်အညွှန်းကစား။
2.Cost-ထိရောက်သောအခမဲ့အွန်လိုင်းမြေပုံနှင့်အတူ: သင်ထိုကဲ့သို့သောအခမဲ့များအတွက် Google မြေပုံ IGO, Sygic နှင့် Waze အားမြေပုံအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောအွန်လိုင်းမြေပုံများအားအလွယ်တကူဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Google ကမြေပုံနှင့်အတူ, သင်အရှိဆုံးတိကျမှုနှင့်ကို up-to-date ဖြစ်အောင်လမ်းကြောင်းများ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအသွားအလာဒေတာနှင့်ပိုပြီးရနိုင်။ သင့်ရဲ့လမ်းတစ်ဝှမ်းပိုမြန်လွယ်ကူမည်သည့်အခါမျှရှာပါ။ လွယ်ကူသော-connected အင်္ဂါရပ်ကိုထောကျပံ့: android စမတ်ဖုန်းနှင့် devices များနှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့, အလွယ်ကူသော-connected အင်္ဂါရပ်သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းများနှင့်ကားကိုဦးခေါင်း uni အကြားနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်မှုနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျရိုးရှင်းစွာလိုအပ်သည့်အပိုမရှိဆော့ဗ်ဝဲနဲ့, ကို USB မှတဆင့် uni ရန်သင့်စမတ်ဖုန်းနှင့်ချိတ်ဆက်တွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
3. ဒီစီးရီးကတခြား Hyundai ကားကို fit နိုင်သည် AZERA 2011-2012 / Grandeur 2011-2012 / Grandeur HG 2011-2012 / HG 2011-2012 / I55 2011-2012 / sonata 2011-2013 / sonata 2015-2016 / Verna / accents / Solaris 2011-2012 / 2016 H1 / H1 2011-2012 / I40 2011-2014 / I30 2011-2014 / Tucson / IX35 2009-2013 / Santa Fe 2006-2011 / Elantra / Avant / I35 2011-2013 / Veloster 2011-2013 / I20 2014-2015 / I10 2014-2015 / IX25 2014-2015 ။
Hyundai က Android ကား DVD Hyundai က Android 4.4 ကား DVD Hyundai က Android 5.1 ကား DVD Hyundai က Android 6.0 ကား DVD Fiat က Android ကား DVD